फुटपाथमा प्राधिकरणका बाकस, पैदलयात्रुलाई हिँड्नै सकस :: सविना कार्की :: Setopati
विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत बनाउने क्रममा सडकमा राखेको प्यानल बक्स र अन्य सामानहरू। तस्बिरः सविना कार्की/सेतोपाटी
मैतीदेवीका सन्दिप खड्का बबरमहलको किङ्स कलेजमा अध्ययन गर्छन्। हरेक दिन धोबिखोला करिडोरको सडक हुँदै आउँछन्, जान्छन्।
दुई महिना बढी भयो, सन्दिपलाई यो बाटो हिँड्न डर लाग्न थालेको। कतै सडकमा गाडीले हान्दिने हो कि!
यो करिडरको बाटोमा पैदलयात्रुका लागि एकतर्फी मात्र, त्यो पनि साँघुरो फुटपाथ छ। खोला किनारमा रूखबिरूवा छन्। यही एकतर्फी खुम्चिएको फुटपाथमा सामान थुपारेर राखिदिएपछि सन्दिपलाई हिँड्नै सकस भएको हो।
'फुटपाथमा यसरी सामान राख्दा पैदलयात्रीलाई मुश्किल र जोखिम भएको छ,' सन्दिपले भने, 'हामी सडकबाटै हिँड्न बाध्य छौं।'
फुटपाथ मिचिएको कुरा नौलो त होइन। तर यहाँ पैदलयात्रुको बाटो मिच्ने सरकारी निकाय हो। केही महिनायता विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत बनाउने भन्दै फुटपाथ अव्यवस्थित बनाएको छ।
एकातिर फुटपाथ खनेर प्यानल बक्स राखिएको छ। अर्कोतिर बाकस वरपर मोटामोटा तार छरिएका छन्। अनि अरू सामग्रीले भरिएर हिँड्ने ठाउँ नै छैन।
करिडोर सडकको पहेँलो पुलदेखि बिजुलीबजारसम्म करिब ४० ठाउँमा हरेक ५० मिटर दूरीमा यस्ता साना-ठूला प्यानल बक्स राखिएको छ। साँघुरा फुटपाथ च्यापेर सडकको पेटीमा राखिएको बक्सका कारण पैदलयात्रु पेटीबाट झरेर सडकमा हिँड्नुपर्छ।
दुई महिनादेखि यो समस्या भोग्दै आएको र काममा पनि ढिलासुस्ती भएको स्थानीय तथा पैदलयात्रीको आरोप छ।
'तारको गन्जागोललाई भूमिगत गराउने काम राम्रो हो तर यसरी अव्यवस्थित गर्नुभएन,' सेतोपुलका स्थानीय देवेन्द्र शाही भन्छन्, 'प्राधिकरणले दसैंलगत्तै यी बाकस राख्यो। अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेन।'
धोबिखोला करिडोरमा आवतजावत गर्ने यात्रुले मात्र होइन, काठमाडौंका अधिकांश साना-ठूला सडकमा पैदलयात्रुले उस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। फुटपाथ यसै साँघुरा, एउटा मान्छे सजिलै हिँड्न सकिन्न। अधिकांश ठाउँमा त दुई खुट्टै टेकिँदैनन्। अझ कहीँकहीँ फुटपाथै बिलाउँछ।
यिनै खुम्चिएका फुटपाथमा कहिले हरियालीका नाममा ठ्याँस्स रूख रोपिन्छ। कहिले सफाइका नाममा डस्टबिन ठड्याइन्छ। कहीँ निर्माण सामग्रीदेखि पसलसम्म फिँजारिन्छन्। अनि त्यसमै ठिंग हुन्छन् बिजुलीका पोल। यसैमाथि प्राधिकरणले प्यानल बक्स राख्दा के होला!
'फुटपाथमा यत्रा बाकस ठडिएका छन्। सडकमा हिँड्दा गाडी हुँइकिएर आउँछ। हान्दिने हो कि डर हुन्छ,' आक्रोशित हुँदै एक पैदलयात्रुले भने, 'यसरी कहिलेसम्म जोखिम लिने?'
सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दो छ। फुटपाथ छाडेर सडकमा हिँड्दा डर लाग्नु स्वाभाविक हो। तर पैदलयात्रुको अधिकार र मान्छे जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थामा ध्यान नदिइकन काम सुरू गर्ने अनि सक्न ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ।
प्राधिकरण भने यहाँको काम ढिला हुनुमा प्राविधिक समस्या र स्थानीयको अवरोध रहेको बताउँछ। रत्नपार्क वितरण केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यका दक्षिण तथा पूर्वी विद्युत वितरण प्रणाली शुद्धीकरण आयोजनाले धोबिखोला कोरिडोर खण्डको तार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको छ।
आयोजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ साँघुरो र फुटपाथ नभएको सडकमा काम गर्न मुश्किल भएको बताउँछन्।
'कतिपय ठाउँमा काम अघि बढिरहँदा स्थानीयले बाधा पनि गर्छन्,' सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढेको छ।'
उनका अनुसार धोबिखोला करिडोर खण्डमा केबल तार तान्ने काम सकिइसकेको छ।
'तार भूमिगत गराउने क्रममा सडकको कालोपत्र भत्काइएको हुन्छ। त्यो बनाउनु पर्नेछ। काम सकिएपछि प्यानल बक्स त्यहीँ बस्छ, पोलहरू हट्छन्,' श्रेष्ठले भने।
काम सक्न त्यस क्षेत्र वरपर बत्तीको लाइन दिनभर बन्द गर्नुपर्छ। अहिले एक–दुई घन्टा मात्र बन्द गर्न पनि मुश्किल भएकाले काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
तार भूमिगत गराउने क्रममा पैदलयात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको स्वीकार्छन् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई। सडकपेटी र फुटपाथ साना भएकाले आयोजनालाई पनि काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए।
'तार भूमिगत गर्ने बेग्लै खाली ठाउँ अभाव छ। फुटपाथमै सबै सामान राख्नुपरेको छ। त्यसैले अव्यवस्थित देखिएको हो,' उनले भने।
काठमाडौंका मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने काम तीव्र भइरहेको तर भित्री सडकमा विभिन्न समस्या देखिएको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन्। लाजिम्पाटदेखि नारायणगोपाल चोक हुँदै बुढानिलकण्ठ सडक र अन्य केही रूटका सडकको तार भूमिगत गराउने जिम्मा काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तरी विद्युत प्रसारण प्रणाली शुद्धीकरण आयोजनाले पाएको थियो। हालसम्म यो खण्डको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख अभिषेक अधिकारीले जानकारी दिए।
'बाँसबारी सडक क्षेत्रमा हामीले काम सकेपछि खानेपानी आयोजनाले सडक भत्काइदियो। केबल पनि ड्यामेज भएको छ। त्यहाँ के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' उनले भने।
आयोजनाका अनुसार हालसम्म पाइप हाल्ने काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ। नगर तथा महानगरका भित्री सडकमा आयोजनाले काम गरिरहेको बताउँदै अधिकारीले असार मसान्तसम्म काम सकिसक्नुपर्ने बताए।
तर भित्री बाटोमा प्रायः स्थानीयले बक्स राख्न नदिएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। प्यानल बक्सले घरघरमा तार पुर्‍याउने भएकाले यो फुटपाथमै रहने पनि उनले बताए।
सडकमा जथाभावी गाडिएका पोल र छरिएका तार व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गतेबाट रत्नपार्कदेखि महाराजगञ्जसम्मको विद्युत प्रसारणलाई भूमिगत गर्ने काम सुरू गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्जबाट काठमाडौंको विद्युत् प्रणाली भूमिगत गरी स्वचालित गराउने अभियान सुरू गरेका थिए। प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी केइआइ इन्ड्रस्टिजसँग सम्झौता गरेर यो काम अघि गरिरहेको छ। काम सक्न करिब ७ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, ०६:०७:००